Zip Qalabka Dayactirka. Dayactir Zip Faylka. Zip Dayactir Software.
DataNumen Zip Repair waa ugu fiican Zip qalabka dayactirka iyo soo kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa musuqmaasuqa Zip faylasha iyo dib u soo kabashada inta ugu badan ee xogtaada ee suurtogalka ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,466 cod)
maxaad DataNumen Zip Repair?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee a zip soo kabashada. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen Zip Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale, oo uu ku jiro WinRAR iyo kuwa kale zip qalabka dayactirka, suuqa!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen Zip Repair sigaar cabaya tartanka
Waxaan iskudayey inaan furo arkto ay kujiraan sawiro duug ah, laakiin waan kari waayey, qalad awgiis. Markaas ayaan isticmaalay DataNumen Zip Repair wuuna sameeyay sixirkii.
Suuqa ka fariistay
Hadda waxaa laga soo ceshaday qiyaastii 1GB sawir Zip faylasha Waxaan u maleynayay in runti la ii buuxiyay laakiin DZIPR wax badan baa faqay
Waxaan u taageeray faylasha qaar a Zip faylka ka soo baxa buuggeyga 'Mac G4'. Ma lihin wax aan ka doorto marka laga reebo inaan iyaga ku taageero PC-ga, iyo markaan isku dayo inaan unzip, Waan helay taas
Dayactirka Dufcadda ka dib, dhammaan faylasha si guul leh ayaa loo dayactiray waxayna u soo saarayaan mac-keyga dariishadaha PKZip iyo Khariidaynta Shabakadda SaMBa. Aniga
Alaab aad ufiican !! Waan shaki qabay laakiin hadda dib ayey u soo ceshatay keydkii zip kaydka iimaylkayga waana lay beddelay :)
Mahad badan iyo
Shaqeeyaa weyn. Waqti badan baa ii keydsaday halkii aan ka soo dejin lahaa feyl ka yimid ilo kale maxaa yeelay feylku waa musuqmaasuq, barnaamijkani wuu hagaajiyaa. A
Waxaan raadiyay meel aan post ammaano laakiin waxba ma helin. Waxaan jeclahay inaan ka caawiyo dadka kale ee dhibaatada la gala musuqmaasuqa zip faylka. waxaan ahaa
Waxaan soo ciyaaray ciyaaro badan, iyo noocyo kale oo feylal ah oo la musuqmaasuqay, ka hor intaanan helin barnaamijkan, ayaa khalday kumbuyuutarkayga, kani waa mid ka mid ah
$ 30 aniga
Waxaan isku dayay dhowr shey markaan raadinayo si aan u soo ceshado a Zip feyl ka kooban sanad dhan oo keyd ah e-mayl laakiin kuwa aan guuleysan, illaa iyo hadda. Aniga
Soojeedinta muuqaalka: kartida wax lagu taxo
Waan soo ceshay dhammaan dhaawacyadayda *.zip faylasha Dhibaatada kaliya waxay ahayd inay dhib kala kulantay *.zip faylasha oo iyaga laftoodu ay ahaayeen zipwaddo Hadii kale 10 banaanka
Waa nasteexo inaad ku aragto barnaamij fudud oo waxtar leh halkaas
Most waqtiga waqtigaadii caadiga ahayd ee aad furtay haddii aad soo dejiso a zip faylka waxayna leedahay qalad crc, gaar ahaan haddii zip file
Runtii waa barnaamij aad ufiican, oo loogu talagalay dadka soo dejista faylasha waaweyn ee sfx ee internetka ee waxyeelada leh waxaan kugula talinayaa barnaamijkan! waa
Runtii waa barnaamij aad ufiican, oo loogu talagalay dadka soo dejista faylasha waaweyn ee sfx ee internetka ee waxyeelada leh waxaan kugula talinayaa barnaamijkan! wuu hagaajiyaa zip faylasha iyo faylasha sfx waa wax weyn! laakiin waxaan u maleynayaa in barnaamijkan softiweerku u baahan yahay awood uu ku dayactiro rar faylasha sidoo kale:
Xaqiiqdii! Waxaad isticmaali kartaa qaybta ku qeexan websaydhkaaga ama suugaan kasta oo xayeysiis ah. Ii ficil samee oo tifaftiro tixraaca CRC, ilaa CRC iyo
Waxaad ku heli doontaa codkeyga adeegga PC-ga ugu fiican. Tan iyo markii aan iibsaday DZIPR, waxaan u isticmaalay dhowr jeer feylasha muujinaya CRC-da xun ama mid kale lahaa
laba saac ka hor oo si fiican ayey u shaqeysay !!! Khibradeyda waa la soo koobi karaa
Waxaan haystay 800 MB zipfaylka leh 97,00 oo lagu abuuray Solaris oo khalad ku helay "dirkiisa dhexe". Markii tani dhacday, ma aanan heli karin wax ka badan kan
Waxaan helay aaladdaada anigoo isticmaalaya websaydhka http://rmse.awardspace.com waxaanan jecelahay inaan iraahdo aaladdaadu waa mid laga cabsado waxyaabo badan.
Ha u oggolaan, way shaqaysay! Waxaan ahay SOOO FARXAD! Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada oo dhan! Hadda 100% waan ku qanacsanahay oo waan joojinayaa inaan ku dhibayo. lol. MAHADSANID
Runtii waan ku faraxsanahay adiga
Waad ku mahadsantahay jawaabta degdega ah ee dhameystiran. Xalkaagu wuu shaqeeyay! Software-ka weyn 'Splitter Software' ayaa shaqeeyay, ka dibna Advanced Zip
Waxaan haysanay 60 Gigabyte zip feyl aan furi doonin Advanced Zip Repair dayactiri kari waayey maadaama uu aad u weynaa. Si kastaba ha noqotee, DataNumen i siiyay
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Zip Repair v3.2
Hagaajin karaa dhammaan noocyada-hoosaadyada Zip faylasha iyo dhammaan noocyada faylasha is-soo-saarista.
Hubi hufnaanta xogta oo ku hagaaji qaddiyadaha CRC ee khaldan arjiga.
Taageero lagu dayactirayo Zip feylasha iyo Zip shay faylasha ka weyn 4GB.
Taageero lagu dayactirayo Zip faylasha, kala Zip faylasha oo la xareeyay Zip files.
Taageero lagu dayactirayo Zip faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah faylasha.
Taageero si loo helo oo loo xusho Zip faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka macmiilka.
Taageero si loo soo saaro walxaha la soo saaray ee go'an Zip ama diiwaanka SFX.
Isticmaalka DataNumen Zip Repair inuu ka soo kabsado Khasaaraha Zip Archives
Marka aad zip faylasha way waxyeeloobeen ama musuqmaasuqeen oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen Zip Repair si loo baaro zip faylasha iyo soo kabsado xogta ugu badan iyaga intii suurto gal ah.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii dhaawac ama musuqmaasuq ah zip faylasha leh DataNumen Zip Repair, fadlan xir wixii barnaamijyo kale ah ee wax ka beddeli kara zip files.
Xullo waxyeelada ama musuqmaasuqa zip faylka la dayactirayo:
Waad ku dari kartaa zip si toos ah magaca faylka ama guji kan badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho zip faylka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Marka la eego, DataNumen Zip Repair dayactiri doonaa ah zip fayl oo soo saar dhammaan waxyaabaha ku jira galka la yiraahdo xxxx_recovered, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha zip faylka. Tusaale ahaan, il ahaan zip faylka Waxyeellozip, Buugga wax soo saarka ee soo baxa ah ayaa Damage_recovered. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad ku dari kartaa magaca galka wax soo saarka si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u isticmaashid oo aad u xulato galka wax soo saarka.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Zip Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta isha zip faylka. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha laga helo zip faylka si guul leh ayaa loo dayactiri karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa galka wax soo saarka oo aad marin u heli kartaa waxyaabaha ku jira Zip gudbiso.
DataNumen Zip Repair 3.2 waxaa la sii daayay Diseembar 19, 2020
DataNumen Zip Repair 3.0 waxaa la sii daayay Oktoobar 30th, 2020
DataNumen Zip Repair 2.9 waxaa la sii daayay Maajo 5th, 2020
Taageero si aad u muujiso log heerar kala duwan.
DataNumen Zip Repair 2.8 waxaa la sii daayay Abriil 22, 2020
Hagaaji heerka soo-kabashada ee walxaha sirta ah.
DataNumen Zip Repair 2.7 waxaa la sii daayay Oktoobar 21th, 2019
In kor loo qaado heerka soo kabashada ee waxyaabaha musuqmaasuqa qayb ahaan musuqmaasuqay.
DataNumen Zip Repair 2.6 waxaa la sii daayay Ogosto 20th, 2019
DataNumen Zip Repair 2.5 waxaa la sii daayay Nofeembar 7th, 2018
DataNumen Zip Repair 2.3 waxaa la sii daayay Abriil 10, 2018
Si toos ah uga soo saar walxaha la soo helay Zip keyd
DataNumen Zip Repair 2.2 waxaa la sii daayay 21 Sebtember 2013
DataNumen Zip Repair 2.1 waxaa la sii daayay 21 Luulyo, 2013
Hagaajinta taageerada faylasha waaweyn.
DataNumen Zip Repair 2.0 waxaa la sii daayay Nofeembar 23, 2012
Dib u qor dhammaan mashiinka soo kabashada.
Taageerada Zip fayl iyo Zip shey ka weyn 4GB.
DataNumen Zip Repair 1.8 waxaa la sii daayay Oktoobar 25th, 2006
Hagaajinta taageerada fidinta / kala qeybinta zip files.
Dayactir iyo soo kabashada musuqmaasuq CAB diiwaanada